N’Golo Kanté oo halkiisa kasii wada rikoorkiisa ku guuleysiga koobabka tan iyo markii uu yimid England – Gool FM
N’Golo Kanté oo halkiisa kasii wada rikoorkiisa ku guuleysiga koobabka tan iyo markii uu yimid England
(London) 30 Maajo 2019. Madaalaha khadka dhexe ee kooxda Chelsea N’Golo Kanté ayaa si layaableh ugu soo bilaawday safka hore kulankii finalka UEFA Europa League, inkastoo la sheegay inuu dhaawac qabay.
Warbaahinta ayaa warisay in N’Golo Kanté uu dhaawac ka qabay jilibka isla markaana uusan kasoo muuqan doonin kulank finalka, halka sidoo kale macalinka Blues ee Maurizio Sarri uu isna sheegay in fursada uu Kanté u heysto kulanka finalka ay tahay 50-50, laakiin arintaas ayaa u muuqata inay tahay ciyaar maskaxeed lagu gaadayay Gunners, maadaama laacibka reer France uu ku soo bilaawday safka hore shaqo fiicana uu ka qabtay gudaha garoonka.
Kulankii xalay ka dhacay magaalada Baku ee caasimada Azerbaijan ayaa ku soo dhamaaday 4-1 loogu awood sheegtay kooxda Arsenal, N’Golo Kanté ayaana sii joogteynaya in xili ciyaareed waliba uuu u dabaal dago koob.
Xiddigii hore ee Leicester City iminkana ka tirsan kooxda Chelsea ee N’Golo Kante ayaa koob kale ku guuleystay, kaddib markii uu xalay sare u qaaday Europa League, isagoo haatan sii wada rikoorkiisa inuu xilli ciyaareed kasta koob ku guuleysto tan iyo markii uu u soo dhaqaaqay Ingiriiska.
Kante ayaana koob ku guuleystay xilli ciyaareed waliba tan iyo markii uu u soo wareegay England xilli ciyaareedkii 2015-16, sidoo kale yaanan ilaabin inuu Koobka Adduunka la qaaday xulkiisa Faransiiska.
Haddaba halkaan hoose ka eeg N’Golo Kante iyo xilli ciyaareed waliba koobka uu ku guuleystay tan iyo markii uu yimid Ingiriiska:-
2015-16 – Premier League ayuu qaaday.
2016-17 – Premier League ayuu hantay.
2017-18 – FA Cup ayuu ku guuleystay.
2018-19 – Europa League ayuu qaaday.
Pedro Rodríguez oo taariikh cusub dhigay kaddib markii uu Chelsea kula guuleystay UEFA Europa League